vendredi, 08 janvier 2016 10:10
Antaninarenina : Hetsika fivorivorian-dovia
Hanao Hetsika fivorivorian-dovia eny Antaninarenina anio zoma 8 janoary 2016 amin’ny 12 ora sy sasany ny fikambanana WAKE UP Madagascar, ho mariky ny fitsipahan’izy ireo ny "fety fandatsàna ny Malagasy" atao eny Iavoloha anio, sy ho "fanehoana ihany koa fa mitaky ny fitantanana ny volam-bahoaka amin’ny fomba mendrika sy tena mahasoa ny vahoaka" ny fikambanana fa "ampy izay ity fandanindaniam-poana ny volan’ny Malagasy ity".
jeudi, 07 janvier 2016 13:09
Mitohy ny fanapara-pahefana sy ny antsonjay
Mpandraharaha iray amin’ny sehatry ny vato ao amin’ny kaominina Marotsipo, distrikan’Anjozorobe indray no lasibatry ny fanapara-pahefana sy antsonjay.Raha ny fanazavan’ity farany dia kolonely 3 milaza ho iraky ny zanaka lahy sy zandrin’ny Filoham-pirenena no tonga tany an-toerana saika hanao bodongerina ny kariera iasany. Manofa tany ity mpandraharaha ity ary nanamafy fa ara-dalana avokoa ny taratasy fahazon-dalana hitrandraka ao an-toerana ary nahaloa tsara ny ofan-tany izy hatramin’izay niasany tao. Nanamarina izany ny tompon’ny tany izay tsy nety nanome halalana ireo kolonely 3 nibodo ny tany hitrandraka ao. Ho an’ny tompon’ny tany, ilay mpandraharaha no efa miasa ao ary tsy manana zo ny hanome ny tany an’olon-kafa intsony izy.
mardi, 05 janvier 2016 09:46
Bevilany Amboasary Atsimo : Loza roa sosona namono olona
Nisehoana lozam-pifamoivoizana hafa kely omaly alatsinainy ny RN13, anelanelan'Amboasary Atsimo sy Tolagnaro, eo amin' ny fiakaran'i Bevilany. Fiara be mpitatitra mampitohy an' i Tolagnaro sy Toliara, fantatra amin'ny anarana hoe TANTSAHA BUS. Araka ny filazan'ny tao anatiny dia noho ny vesatra be loatra dia lany vitesy teo antenantenan'ny fiakarana ity fiarabe ka nihemotra.